Gudiga EACC oo lagu dhaliilay weerarkii ay ku qaadeen aqalka Wa Iria | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Gudiga EACC oo lagu dhaliilay weerarkii ay ku...
Gudiga EACC oo lagu dhaliilay weerarkii ay ku qaadeen aqalka Wa Iria
Waxaa isasoo taraya cambaareynta loo jeedinayo tallaabadii ay gudiga anshaxa iyo la dagaalanka Musuqmaasuqa ee EACC isbuucaan ku weerareen guryo uu leeyahay Gavanaha Countiga Murang’a Mwangi Wa Iria.
Ciidamo ka amar qaata gudigaasi ayaa baaritaano ka sameeyay guryo dhowr ah oo uu leeyahay Mr Wa Iria, si ay uga raadiyaan cadeymo ku aadan eedeymo dhinaca Musuqmaasuqa ah oo loo jeediyay Gavanaha.
Hogaamiyeyaal fara badan si aad ah u dhaliilay habka ay gudiga u wajeheen arrintaasi, iyagoo caro ka muujiyay sida loo fuliyay howlgalladii ka dhanka ahaa Gavanaha iyo xulafadiisa.
Dhinacyada sida weyn uga soo hor jeestay tallaabadaasi ayaa waxaa ka mid ah golaha ay ku mideysanyihiin Gavanayaasha 47-da County ee dalka oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaanno CoG.
Golahaan oo uu hogaamiyo Gavanaha Countiga Meru Peter Munya ayaa sheegay in ay ka shakisanyihiin in gudiga ay howshooda ku dheeheen arrimo siyaasadeed, isla markaana ay u adeegayeen siyaasiyiin kasoo hor jeeda Mr Wa Iria.
Hase ahaatee sheegashooyinkaasi ayaa waxaa gaashaanka ku dhuftay madaxa maamulka guud ee gudiga la dagaalanka Musuqmaasuqa Halake Waqo oo sheegay in ay ciidamadooda markii ay guryaha Gavanaha weerarayeen heysteen warqado sharci ah oo u ogolaanaya howlgalladooda.
Sidoo kale hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka baarlamaanka ee dalka Aden Barre Ducale oo taageeray howsha gudiga EACC ayaa sheegay in gudigaasi iyo gudiyada kale ee madaxa bannaanba ay xor u yihiin howlohooda.